Safarka Mareykanka wuxuu soo dhaweynayaa Hadalka Biden ee ku saabsan Qaadista Xayiraada Safarka Caalamiga ah ee Mareykanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Safarka Mareykanka wuxuu soo dhaweynayaa Hadalka Biden ee ku saabsan Qaadista Xayiraada Safarka Caalamiga ah ee Mareykanka
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Sayniska ayaa sheegaya in Mareykanku uu si ammaan ah dib ugu furi karo socdaalka caalamiga ah hadda, gaar ahaan waddammada horumar weyn ka sameeyay tallaalka muwaadiniintooda.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waqtiga qaadista xayiraadaha socdaalka ee caalamiga ah ayaa iman kara 'dhowrka maalmood ee soo socda.'
Iyada oo ay jiraan ilaalin habboon, daraasado ay sameeyeen Waaxda Difaaca Mareykanka, Mayo Clinic iyo Jaamacadda Harvard ayaa si madaxbannaan u soo gabagabeeyay badbaadada safarka hawada.
Maalin kasta oo xannibaadaha duugga ah ee socdaalka jira waxay dhaawac u geystaan ​​qarankeenna.
Ururka Socdaalka Mareykanka Madaxweyne ku -xigeenka Fulinta ee Arrimaha Dadweynaha iyo Siyaasadda Tori Emerson Barnes ayaa soo saaray bayaankan soo socda ee ku aaddan hadalka Madaxweyne Biden ee dib -u -furidda socdaalka caalamiga ah:
“Waxaan soo dhaweynaynaa hadalka madaxweynaha, oo uu la gaarsiiyey Chancellor -ka Jarmalka Angela Merkel, in macluumaad dheeri ah oo ku saabsan waqtiga qaadista xayiraadaha socdaalka caalamiga ah ay imaan karto 'dhowrka maalmood ee soo socda.'
“Saynisku wuxuu leeyahay waxaan si ammaan ah dib ugu furi karnaa socdaalka caalamiga ah hadda, gaar ahaan waddammada horumar weyn ka sameeyay tallaalka muwaadiniintooda. Iyada oo ay jiraan ilaalin habboon, daraasado ay sameeyeen Waaxda Difaaca Mareykanka, Mayo Clinic iyo Jaamacadda Harvard ayaa dhammaantood si madax bannaan u soo gabagabeeyay badbaadada safarka hawada maanta.
Maalin kasta oo xannibaadaha duugoobay ee socdaalka jira waxay u geystaan ​​dhaawac dhaqaale qarankeenna, iyadoo aan la xusin khasaaraha shaqsiyeed ee ka soo gaaray qoysaskooda iyo eheladooda. Xayiraadaha safarka ee la xiriira Kanada, Yurub iyo UK oo keliya ayaa dhaqaalaha Mareykanka ku kacaya $ 1.5 bilyan toddobaad kasta - oo ku filan in lagu taageero 10,000 oo shaqo oo Mareykan ah.
"Warshadaha safarka ee Mareykanka waxay ku boorinayaan maamulka Biden, si waafaqsan sayniska ugu dambeeyay, inay si deg deg ah dib ugu eegaan siyaasadaha gelitaanka ee socdaalka caalamiga ah."
Qolka cusub ee Airbus Single-Aisle Airspace wuxuu raaxada ku darayaa ...